I-Currant | Umlimi wasemadlelweni we-intanethi | April 2020
Indlela yokutshala nokunakekela ama-currants amnyama
Uyini usizo lomkhiqizo omnyama? I-currant emnyama ibhekwa njengamanye amajikijolo awusizo kakhulu futhi ahlwabusayo. I-currant emnyama isetshenziswa ekudleni, ukupheka. Isetshenziselwa ukuvimbela izifo ezithile. I-currant emnyama inikeza umzimba womuntu ngezinhlobo ezahlukene zamavithamini (A, amavithamini eqembu E, B, C, H), ama-microelements (i-fluorine, insimbi, i-iodine, ithusi, i-cobalt, i-zinc, i-manganese), i-macrocells (i-calcium, i-potassium, i-phosphorus, i-calcium).
Sekuyisiko kithi ehlobo ukuqoqa amajikijolo ama-black currant kanye namajikijolo abomvu. Yilezi izinhlobo ezimbili ze-currants seziye zagxila ezindaweni zethu. Kodwa bambalwa abantu abazi ngezinye izinhlobo ezihlukahlukene zaleli berry - i-currant yegolide, igama lesibili elithi "krandal". INyakatho Melika ibhekwa njengendawo yokuzalwa yalolu hlobo lwe-currant, lapho endaweni ephakathi nenyakatho-ntshonalanga neMexico lezi zihlahla zikhula ngokuzimela, ngaphandle kosizo lomuntu.
Indlela yokuphatha ama-currants ezifweni
I-Currant iyisitrub esingafinyelela ku-2.5m ukuphakama. Amaqabunga e-Currant anamazinyo amakhulu eceleni, amajikijolo afinyelela ku-1 cm ububanzi futhi abe nephunga elinamandla elimangalisayo. I-currants ingakhula emthunzini, kodwa indawo enhle kakhulu iyoba inhlabathi endaweni enelanga, ekhanyayo. I-currant amajikijolo aqukethe amavithamini amaningi, ama-acid, ama-micro-macronutrients.
Indlela yokuvikela ama-currants ezivela ezinambuzane
Samukela abathandi bensimu! Lesi sihloko sizogxila ezinambuzane ze-currant. Sizokutshela ukuthi iyiphi inkathazo ngayinye, ukuthi ingakanani umonakalo ongayenza esihlahleni sakho se-currant nendlela yokulwa nayo. Uyazi? Ijusi le-blackcurrant lisetshenziselwa ukulungisa amachayi okudla.
Imithetho embalwa nezincomo zokunakekelwa kwe-currant emhlophe
Namuhla sizokhuluma ngama-currants amhlophe. Sizokutshela indlela yokutshala i-currant emhlophe entwasahlobo, ukhethe indawo yokutshala nenhlabathi efanelekayo. Ngemuva kokufunda lesi sihloko, uzoba nolwazi olwanele lokukhula currants enempilo kanye ne-fruiting. Uyazi? I-currant ibhekisela ku-oda le-Camouflaged.
I-currant emnyama: siyitshala, sikhula, sivuna
I-currants ingatholakala cishe kuyo yonke ingadi, njengoba ibheji ethandwa kakhulu. Leyo currant emnyama iyathandwa kakhulu phakathi kwabanye (obomvu negolide). I-currant emnyama inamavithamini amaningi futhi idlula ama-strawberries ngezikhathi ezingu-5 ekuhlungeni kwawo, izithelo ze-citrus ngezikhathi ezingu-8, ama-apula nama-pears izikhathi ezingu-10, namagilebhisi izikhathi ezingaba ngu-100.
Indlela yokuvikela ama-currants akho ezifweni nasezinambuzane
Cishe bonke abalimi nabanini bomhlaba bakhetha ukulimala i-currant. Ezindaweni ezivame kakhulu ukuhlangabezana ne-black currant (i-Ribes nigrum), obomvu (i-Ribes rubrum) ne-currant emhlophe (i-Ribes niveum), futhi i-currant ephuzi isanda kudumile. Izifo ze-currant kanye nokwelapha kwazo Uma ufuna isihlahla sakho sikujabulise ngamajikijolo unyaka nonyaka, kufanele ungazi nje kuphela izinselele eziyinhloko zokunakekelwa, kodwa nezama-currants nezinambuzane ze-currants.
Indlela yokukhipha ama-aphid kuma-currants
I-currant ingenye yezitshalo ezivame kakhulu ezibhekele ezitsheni zethu. Abalimi abalulekayo ukungazithobeki ekunakekeleni, emifino enomnandi, enomnandi namajikijolo amnandi, amavithamini anamandla kanye nama-microelements. Ukulima ngokuphumelelayo kwezitshalo kufanele kuchaze indlela yokubhekana nama-aphid kuma-currants-inkathazo ejwayelekile.
Indlela yokunakekela ama-currants ekwindla, okufaka ukunakekelwa kwe-autumnal
I-currant ingenye yamajikijolo enomnandi kakhulu futhi enempilo, ukunakekelwa kwezihlahla ezenziwa yizo zonke izivande futhi ziyadingeka ikakhulukazi ekwindla. Isicelo salo singatholakala kokubili ekuphekeni nasekudleni. Esikhathini sokuqala, i-compote kanye ne-jam iyabiliswa kusuka kumajikijolo e-currant, asetshenzisiwe amasha, ngisho namaqabunga e-currant asetshenziselwa ukulondolozwa, futhi ama-teas anomsindo aphulwa kubo.
Ukunakekela ama-currants entwasahlobo: ukusika, ukudla, ukuvikela izifo nezinambuzane
Ama-currants amnyama, abomvu nalabo abomhlophe yizilimo ezithandwayo kakhulu, ngakho-ke, izakhamuzi eziningi zasehlobo zinesithakazelo ekunakekelweni kwe-currant ngemuva kwebusika. Kulesi sihloko sizokhuluma nge-nuances yokusika izihlahla, ukudla, ukuchelela nokucubungula kusuka ezinambuzane zalezi zitshalo, futhi futhi uhlale ekubhekeleni kokuvikela izihlahla ezivela emaqabungeni asehlobo entwasahlobo.
Kunokuba ukondle ama-currants entwasahlobo: amathiphu amatsha
I-currant iyisitshalo esingenakuzithoba, okhiqiza izithelo eziwusizo ezidlula ezinye amajikijolo ukunambitha nokuningi kwezinto eziwusizo. Inani laso elikhethekile liwukungathobeki. Kodwa okwamanje izithelo ezinkulu nezinkulu, kubalulekile ukunikeza isitshalo izisebenzeli ezengeziwe zokukhula ngonyaka. Ngakho-ke, abalimi abanakekelayo bakondla ama-currants entwasahlobo nasesikhathini sonke.
Iyini i-currant ebomvu ewusizo: izakhiwo zokwelapha nokuphikisana
Amaqoqo amancane anezithelo ezibomvu ze-currant ezibomvu endaweni yethu ajwayelekile. Zitholakala cishe kuzo zonke izigceme. Futhi konke ngoba lezi zitshalo ezingenasithunzi zinegunya lokuphulukisa lonke ubunzima bamavithamini namaminerali. Ngisho nokhokho bethu babiza ukuthi izithelo zabo ezibomvu ziwumthombo wobuhle, amandla nokuphila isikhathi eside.
Yini ewusizo i-currant emnyama: ukuphulukisa izindawo nokuphikisana
Iphunga le-currant ehlathini alikwazi ukudideka nanoma yini enye. Uma uzizwa empilweni yakho, uzoyikhumbula kuze kube phakade. Amajikijolo, amaqabunga, amahlumela - konke kugcwele lephunga. Ngakho-ke, eRussia, le berry sekuyisikhathi eside ibizwa ngegama elithi "currant" (e-Old Church Slavonic, "iphunga elinamandla"). Ngaphezu kwephunga, lidumile ngezimfanelo zalo ezikhethekile ezikhethekile.
I-currant emhlophe: okuqukethwe kwekhalori, ukubunjwa, izakhiwo ezizuzisayo kanye nokuphikisana
I-Currant ivame ukuhlotshaniswa nezinhlobo ezimbili eziyinhloko - abamnyama nabomvu. Owokuqala, njengoba uyazi, uqukethe izinto eziningi ezisebenzayo, kodwa ngokuqondene nezimfanelo zokunambitheka zomuthi ngamunye wezokwelapha. I-currant emhlophe iyinhlobo yezitshalo eziningi kakhulu, kodwa nokho, ngokubaluleka kwayo, akuyona neze ephansi "kwesihlobo" esibomvu.
Iresiphi ethandwayo yokwenza iwayini elimnyama i-currant ekhaya
Iwayini elihle - eliphekwe ngezandla zakhe. Enye yamajikijolo athandwayo okwenza isiphuzo i-currant emnyama. Emva kokufunda lesi sihloko, uzothola ukwenza iwayini elenziwe nge-blackcurrant. I-Black Currant Wine: Uhlu Lwezingxube Ukwenza isiphuzo sewayini okuzenzelayo inqubo eyinkimbinkimbi futhi enzima.
Indlela yokubhekana nokugqwala kwesilazi kwi-currants
Ukugqwala kungenye yezifo ezivame kakhulu neziyingozi ze-currants nama-gooseberries. Incazelo, ukuxilongwa, ukwelashwa - sizokhuluma ngakho ngezansi. Ingozi yokugqwala Isitshalo esibulalayo siqala ukulahlekelwa amaqabunga, ikhwalithi lamajikijolo ayawohloka, futhi ukushisa kwamaqhwa kunciphisa. Izinqubo ze-shrub ze-metabolic ziphazanyiswa, i-photosynthesis, ukukhula kulahlekile, nokukhuphuka kwamanzi kuyanda.
Indlela yokunciphisa ama-currants
Ngaphandle kokuvuselelwa konyaka, izihlahla ze-currant ngeke zikwazi ukusebenzisa amandla azo okugcwele okukhiqiza ukulimala okuningi. Futhi konke ngoba amajikijolo ahlanganiswe namagatsha okukhula konyaka odlule, okungengaphezu kweminyaka emihlanu. Yingakho kubaluleke kakhulu ukukhipha konke okudala, okomile, okonakalisiwe, okuncintisana omunye komunye futhi okuphazamisa ukukhula kwezici ezintsha.
Amathiphu aphezulu ekunakekeleni nasekutshalweni kwezinhlobo ze-blackcurrant "Okumangalisayo"
Izinhlobo ezihlukahlukene ze-black currant "Yadrenaya" yaziwa iminyaka engaphezu kwengu-30. Bred by abalimi base-Altai, lezi zihlukahlukene ngokushesha zizibiza ngenxa yokumelana nokushisa okukhulu, ukuvunwa okuhle kanye nobukhulu obukhulu bamajikijolo (kwakungenye yezinto zokuqala "ezinkulu" emhlabeni we-currant). I-Currant "Yadrenaya" iyaqhubeka ithandwa phakathi kwabalimi.
Ukulawulwa kwe-powdery isikhutha esiqinisekisiwe se-currants
Iphunga le-Mealy (ngamanye amazwi, umlotha noma umlotha) yisifo esiwufungayo esibangelwa isikhunta esincane kakhulu esiphila enhlabathini - umyalelo we-powdery erysipelas noma i-erysiphoid. I-Currant ihlushwa yi-fungus. I-mealy idonsa ingxenye yesitshalo esingaphansi komhlabathi - amaqabunga, ama-petioles, amaqabunga, izithombo kanye namahlumela kulo nyaka, kanye nephuzu elikhulayo.
Sakha currants kusuka cuttings kanye nezithombo
I-Currant iyi-shrub enamagatsha emndenini wokugcoba. Inqubo yokutshala nokunakekela amajikijolo kudinga ulwazi oluthile namakhono. Kulesi sihloko sizobuka indlela yokutshala ama-currants entwasahlobo, kanye nokunikeza isinyathelo ngesinyathelo sokuqondisa isenzo. Lapho ukutshala Ukwindla kwasekuqaleni yisikhathi esihle sokutshala ama-currants, kusukela ebusika umhlabathi ozungeza amahlumela e-bush and thickens, okubangela ukuthuthukiswa okungcono kweberry.